Indlela Yokukhetha Amathuluzi Okuphatha Amafu Okunene
Iwebhu & Usesho Ukuqalisa iwebhusayithi
Umhlahlandlela Oyisisekelo Wokukhetha Amathuluzi Okuphatha Amafu Okunene
Ngaphambi kokuba uthumele noma iyiphi i-cloud system, kufanele uthathe isinqumo mayelana namathuluzi wokuphatha ifu ongayisebenzisa. Kunemithombo eminingi etholakala emakethe. Bambalwa amathuluzi ahlanganiswe natively kumasites, futhi kukhona amathuluzi esithathu, athembisa ukuphathwa kuzo zonke izikhungo zedatha ezihanjiswayo. Yonke inhlobo iza nezinzuzo zayo kanye nezinkinga zayo. Udinga ukukhetha amathuluzi wakho wokuphatha ifu ngokusekelwe ezidingo zomsebenzi wakho, nezinye izinto eziningi.
Njengokuba kunoma yimuphi omunye ubuchwepheshe, ikhono lokuqapha ifu kanye nabalandeli abambalwa abangaphezu kwamanye amazwe kuzokhombisa izinga lokuqina okumele kube khona imvelo. I-hybrid, i-private noma i- cloud yomphakathi ingadinga ukuthi wonke umuntu asebenzise amathuluzi akhe.
Noma kunjalo, wonke amasethi abalulekile amathuluzi wokuphatha ifu azoba nokucabangela okufanayo. Njengoba kunesisekelo sezingqalasizinda, ama-admins kufanele abe nokuqonda okucacile mayelana nemvelo yabo. Isofthiwe yokuqapha ephumelelayo namathuluzi kufanele ibe nezici ezingezansi.
Ukuphathwa Kwemithombo : Ukubonakala okujulile kwezinsiza kuvela ngezigaba eziningana. Kubalulekile ukucabangela indlela okusetshenziselwa ngayo imithombo yefu yomzimba. Lokhu kusho futhi ukuhlaziya amagrafu, ukuqoqa imininingwane yezibalo, nokunakekela ukuhlela kwesikhathi esizayo. Ukuphathwa nokubonakala kubheka ikhono lomqondisi ukuthola izinsiza ezikhona kanye nokwabiwa kwazo. Uma isabelwe ngokungalungile, kuzoba iphutha elibiza kakhulu.
Ukubala komsebenzisi : Izikhangiso kufanele zihlale zikwazi inani labasebenzisi abafinyelela ifu ngokungeziwe kolwazi mayelana nesiphakeli somsebenzisi ngamunye nemithwalo yabo yokusebenza. Lolu hlobo lokulawulwa kwe-granular lwenza i-IT ihloniphe ukulinganisela kahle nokuphatha isilinganiso se-server-user. Lena yindlela engcono kakhulu yokwenza ukulinganisa umthwalo kumaseva wefu.
Ama-alamu kanye nezixwayiso : Ingqalasizinda enempilo ngokubonakala kahle kwamafu ibandakanye ama-alamu nezixwayiso zokuthola izinkinga ezinjalo ngokuqhubekayo. Ngokuthola izinkinga ngaphambi kokuba bashintshe zibe yizigaba, inkampani ingakwazi ukugcina amazinga aphezulu okuphumula. Kubalulekile ukuba nekhono lokusetha izaziso ngendlela enjalo umqondisi ofanele olwaziswa ngokusekelwe enkingeni. Isibonelo, angeke kube kuhle uma isilondolozi sesitoreji sithunyelwa kumphathi wesiphakeli, ngoba isenzo asikwazi ukuthathwa ekuqaleni ngoba ngenxa yokuthi izaziso zithunyelwa kumqondisi ongalungile.
Amandla we-Failover: Ama-Failover amakhono ngaphezu kwesiphakeli sefu afika ngokubonakala kahle futhi ngaphandle kokubangela noma yikuphi uhlobo lokuphumula kubasebenzisi. Uma kunenkinga noma iphutha, ama-admins angakwazi ukuhluleka amakhasimende kumuntu onogada onamandla okuphatha ivolumu. Lokhu kungenziwa ngokuzenzakalela ezindaweni eziningana. Uma umphathi womzimba ezwa isikhathi sokuphumula, imishini ebonakalayo kumphathi othile izobe ishintshwe ngokuphepha futhi ilinganiswe phakathi kwezinye amaseva ezitholakalayo nezixwayiso zithunyelwa kumqondisi oqondene.
Amalungelo kanye Nemisebenzi : Ukubonakala okuhle kubonisa nokuthi kunamalungelo afanelekile kanye nezindima. Lokhu kusho ukuthi ithimba lokugcina lingafinyelela izingxenye zokugcina ezibheke emafu kuphela futhi iqembu le-virtualization lingathola ukufinyelela kwe-VM. Ukubamba iqhaza okunjalo kuyakha amathrekhi wokuhlola okusebenza kahle. Lokhu kunciphisa ingozi yabasebenzi abenza izinguquko ezingalungile ohlelweni.
Ukucatshangelwa kweSivumelwano Sesevisi Yesevisi : Ukuqonda isivumelwano sezinga lesevisi (SLA) kubalulekile uma usebenza nomhlinzeki wezinkampani ezi-3. Lokhu kusho ukusetshenziswa kwemvelo yokuqapha nokuphumula kwesikhathi. Ngokusekelwe kuhlobo lwe-SLA, amamethrikhi ahlukahlukene asemqoka kumphathi.
Ukugcinwa nokuhlolwa: Njengalokhu kunoma iyiphi ingqalasizinda, ifu idinga ukuhlolwa nokugcinwa. Amathuluzi asiza ama-admins ngezibuyekezo zeseva, ukukhishwa, nokunye umsebenzi wokulondoloza kubalulekile.
Ngaphezu kwakho konke, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi iqoqo lakho lamathuluzi wokuphatha ifu lihambisana ngokuqondile necebo lesikhungo sakho sedatha kanye nezinhloso zebhizinisi. Ngaphandle kwamathuluzi wokuphatha ekahle, isu lakho lemakethe kanye nengxenye yokukhipha ingathinteka kakhulu.
Ukusebenzisa i-Twitter Bootstrap Theme ye-Drupal
Ukusebenzisa iZURB Foundation Theme for Drupal
24 I-Tumblr Day Valentine's Day Ewuthola Inthanethi
I-Bomb Bomb Meme / Impikiswano ku-Tumblr
Indlela Yakha Ibhulogi Yevidiyo Yamahhala (noma i- "Vlog")
Izinto ezingu-6 zokubuyekeza ngaphambi kokuqala iBhizinisi le-Hosting Web
Abathengisi abaphezulu be-Cloud Computing
Ungayifaka Kanjani Isihloko Esizeni Samahhala se-WordPress.com?
I-Darbee Presence Presence - iDarblet Model DVP 5000 - Buyekeza
Ungadala kanjani iKhadi lokuDumisa ngokwezifiso ku-Inkscape
Nendlela Susa iTunes ye-Windows 7 ne-Vista
Indlela Yokubuyisela Umculo Wakho we-iTunes Ngemuva kwe-Crash Hard Drive
Kuyini Ukufunda Komshini?
Izinzuzo Zokuba Umklami WeWebel Freelance
I-Gadgetology: I-drone yesayizi yesundu nesilinganiso sokulayisha umthwalo
I-10 Best Virtual Reality Games For Kids
Bhala ku-HTML: Izigaba kanye ne-Spacing
Umhlahlandlela wokuxazulula i-iPad
Indlela yokushintsha i-Wallpaper ku-iPhone yakho
Ukubuyekezwa kobukhosi bamaDisney
Indlela Yokukhetha Imigqa, Amakholomu, noma Ama-Worksheet ku-Excel
Isaziso se-Google se-Mac OS X 1.10.4 - I-Gmail Mail Checker
Engeza ama-Hyperlink ku-PowerPoint 2003 no-2007
Imidlalo ephezulu ye-Zombie ye-PC
I-Lenovo Y70 Touch
Amafoni we-Huawei Mate: Okudingeka Ukwazi
Kudluliselwa Idatha kuya futhi Kusuka ku-BlackBerry yakho
Ukuxazulula izinkinga zeVivitar amakhamera
Ukubuyekezwa kwe-BuySellAds.com kokukhangisa kwebhulogi